०७८ बैशाख ०४ गते शनिबार, हेर्नुहाेस राशि अनुसार तपाईंहरूको भाग्यफल यस्तो छ… – Namaste Host
April 17, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on ०७८ बैशाख ०४ गते शनिबार, हेर्नुहाेस राशि अनुसार तपाईंहरूको भाग्यफल यस्तो छ…
मिति २०७८ बैशाख ०४ गते शनिबार, हेर्नुहाेस राशि अनुसार तपाईंको भाग्यफल यस प्रकार रहेको छ । नयाँ बर्ष २०७८ काे समस्त नेपालीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना । यहाँहरूको यो बर्ष सुखद र सफल बनोस् । माता पाथिभराको कृपाले यो बर्ष सबैको कल्याण होस् । जय माँ पाथिभराकि!!
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) स्वास्थ्य कमजोर रहे पनि काममा परिस्थितिले साथ दिनेछ । अरूका काममा समय खर्चनुपर्ला । पेटको खराबीले सताउला । पढाइ लेखाइमा पनि ध्यान दिन नसकिएला । पिडा दिनेहरु सक्रिय रहन सक्छन्, एकदमै सावधान रहनु होला । स्वास्थ्यका लागि खानपानमा सजग रहनुहोला ।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) केही चुनौती समेत देखा पर्नेछन् । कोसिस गर्दा केही अवसर मिल्न सक्छ । आर्थिक पक्ष सबल बन्नेछ । चुनौतीहरू सजिलै पार लाग्नेछन् । बुद्धि बिबेकले राम्रो काम गर्नेछ । अनायासै ठिक निर्णय हुनेछ । घरमा पाहुना आगमनको योग छ । काममा सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनेछन् ।
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) व्यापारमा पनि फाइदै हुनेछ तर खर्च भने बढ्नेछ । व्यापार व्यवसायमा फाइदा हुनेछ । प्रतिस्पर्धीहरू पराजित हुनेछन् । आँटेको कार्यमा सफलता मिल्नुका साथै आर्थिक फाइदा हुने देखिन्छ । अचानक उपहार मिल्ने योग छ । योजना गोप्य राखेर अघि बढ्दा फाइदा हुनेछ ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) व्यावसायिक कामका लागि टाढाको यात्रा सम्भावना छ । आय आर्जन भए पनि चोट पटक लाग्न सक्छ । मित्र वर्गबाट साथ सहयोग पाइनेछ । सामाजिक क्षेत्रमा गरेको योगदानले मान सम्मान मिल्ला । घरायसी समस्याले सताए पनि गरेका कार्य सफल हुनाले गर्दा मन सन्तुष्ठ रहने छ ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) झमेला, विवाद र चोट पटकको योग छ । आर्थिक अभावले सताउनेछ भने कामको चाप पनि बढ्ने देखिन्छ । नयाँ काम सुरु गर्ने समय छ । खर्चको मात्रा भने बढ्न सक्छ । काममा ढिला सुस्ती आउनुका साथै आर्थिक हानी हुने सक्छ, सावधान रहनु होला । स्वास्थ्य विग्रन सक्छ ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) पठन पाठनमा ध्यान दिन नसकिएला । काममा समेत केही चुनौती देखा पर्नेछन् । स्वास्थ्यमा देखिने समस्याले नियमित काम एवं पढाइ लेखाइ प्रभावित हुने सम्भावना छ । मन खुशी नै रहे पनि सोचे जती फाइदा हुने छैन । आमाबाट आएको धनको उपयोगबाट लाभ उठाउन सकिनेछ ।
बृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) व्यवसायको सिलसिलामा भ्रमण गर्ने मौका आउला । सम्मान पनि पाइनेछ । कृषि तथा पशुपालनमा खर्च बढ्नेछ । ब्यवसायबाट भने लाभ हुने समय छ । व्यापारमा राम्रै धन लाभ हुनेछ । आर्थिक पक्ष आज सन्तोष जनक रहेको छ । रोकिएका काम बन्ने र नयाँ काम सुरु गर्ने समय छ ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) व्यापारमा फाइदा होला । काम गरेर अरूलाई आकर्षित गर्न सकिनेछ । सामान्य प्रयासबाटै काममा सफलता मिल्नेछ भने वैदेशिक क्षेत्रका अधुरा काम बन्नेछन् । साथीभाइले काममा सहयोग जुटाउनेछन् । रमाइलो तरिकाले कामहरु गर्न पाइनेछ । पशुधन र जमिनबाट लाभ होला ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) विचार नपुर्याई बोल्नाले समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ । सामाजिक प्रतिष्ठा मिल्नेछ । गरेका कामको प्रशंसा हुनेछ । अप्ठ्यारा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नपर्ला । कडा प्रायस गरे पनि सफलता हात नलाग्न सक्छ । कामको बोझले थाकेको महसुस होला । घर गृहस्थीमा भने समस्या आउन सक्छ ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) पहिलेका कमजोरीलाई सुधार गर्न सकिनेछ । टाढिएका सहयोगीहरूको साथ पनि मिल्नेछ । शिक्षा क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सकिनेछ । ब्यापारबाट सोचे झैं लाभ हुनेछ । नयाँ कामको सुरुवात खासै राम्रो छैन । कार्यमा हैरानी बढ्न सक्छ । मनमा दुबिधा रहन सक्ने दिन छ ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) आम्दानी बढ्ने समय छ । मनोरञ्जनपूर्ण क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाइएला । भौतिक सुबिधाको साधन प्राप्ति हुनेछ । शिक्षा क्षेत्र शुभ रहेको छ । सामाजिक काममा नेतृत्वदायी भुमिकामा खटिनु पर्नेछ । काम बन्नाले मन रमाउने छ । बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य पहिल्याउन सकिनेछ ।
प्रेमको नाटक गरेर विबाह बच्चा भएपनि फ’रा’र ‘सबैका बाबा हुन्छ हाम्रो किन बाबा छैन ममी ? भनेर दुई छोरीले प्रश्न गर्दा म र्न मनलाग्छ’ (भिडियो हेर्नुस्).
February 8, 2021 February 8, 2021 Bijay Lama
March 11, 2021 Bijay Lama